Avaho ny vary sy ny tsiparifary – Malag@sy Miray
Tato anatinsquowhawydny andro vitsivitsy dia niverina indray ny resaka famotsoran-keloka na «Amnistie». Miazakazaka miseho aminsquowhawydny haino aman-jery noho izany ireo izay nahatsiaro fa mila manadio tena na ihany koa ireo nosaziana na nogadraina na ihany koa ireo nanao sesi-tany ny tenany nandridtra izay vanim-potoana politika nisesisesy rehetra izay.
Raha ny hevitry ny fitondrana teteza-mita aloha dia nolazainy fa aloe ny vahoaka no hanapaka sy hijery ny momba izay. Mety fahendrena ihany izany fa indrindra indrindra ihany koa fa fialàna aminsquowhawydizay fahatezeransquowhawydireo mpanao politika namana na mpifaninana nefa mety mbola iaraha miasa ihany any aoriana.
Aminsquowhawydny maha-malagasy ny tena dia mahatsiaro tena ho vahoaka ka haneho ny hevitra etoana satria moa tsy misy intsony ny solom-bavam-bahoaka noho ny rafitra teteza-mita dia mahatsiaro tsy manana solo-tena sy mpitondra-teny miakatra intsony.
Arak any voalaza aminsquowhawydny lohateny dia ALEO HIAVAKA NY VARY SY NY TSIPARIFARY!
Ny vary dia ireo izay mpanao politika na mpandraharaha mety nanana firehana hafa ka voapanga noho izay firehany tsy mitovy aminsquowhawydny mpitondra niapanga azy izay.
Ny tsiparifary kosa dia ireo jiolahy na jiovavy nahavita heloka taminsquowhawydireo mpiara-monina sy mpiray tanindrazana aminy. Nangalatra ohatra, namono na nampamono olona, nampihorohoro sy nitaky vola aminsquowhawydny tsy antony, nitarika ireo malaso sy dahalo hanao ny asa ratsiny, nanao fanondrana tsy ara-dalàna (hazo, vatosoa, rongony, «)
Mazava ny resaka, aloe hiavaka izay voaheloka aminsquowhawydny tsy rariny sy ireo tena nahavanon-doza ka mety mbola hambotry ny firenena. Satria dia ampy izay korontana izay, ampy izay fiverimberenansquowhawydny krizy izay, ampy izay fanantenana diso azonsquowhawydny vahoaka izay ka vao nitady hiarin-doha kely dia potraka.
Fanjakana mahefa I Madagasikara ka tsy tokony hisy hitsabaka aminsquowhawydny fitantanana anaty afa-tsy ireo Malagasy tia tanindrazana izay tsy mikatsaka afa-tsy izay mahasoa ny fireneny.
Rehefa mijery ny fandrosoansquowhawydireo firenena zanatany anglisy izay mpikambana ao aminsquowhawydny «Common Wealthsquowhawyd ny tena dia mahatsiaro fa voambaka be ihany I Madagasikara. Rehefa mijery ireo firenena tatsinana raha tsy hilaza afa-tsy Singapore na Malaysie mba tsy hiresahana ansquowhawydI Chine dia mahita fa na misy fahantrana aza ireny firenena ireny dia mitraka tsy menatra satria nahavita.
Faire face à la pénurie dsquowhawydeau